Knock out (2010) | MM Movie Store
ဒီတဈခါမှာတော့ အိန်ဒိယ ရုပျရှငျလောက မှာ ဆနျးသဈတဲ့ ပုံစံနဲ့ လှုတျလှုတျခတျခတျ ဖွဈသှားစတေဲ့ ဇာတျကားလေး တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ နာမညျက knock outတဲ့ မနကျ ၁၁ နာရီ ကနေ နခေ့ငျး၁နာရီ အတှငျး ဖွဈပကျြသှားတာတှကေို စိတျလှုပျရှား ဖှယျရာ ရိုကျကူးတငျဆကျ ထားတာ တှရေ့ပါတယျ။
ဇာတျလမျးအကဉျြးလေးကတော့…. Sanjayy Dutt က ဘယျသူ့ကိုမှ အယုံအကွညျမရှိတဲ့ တိတျတဆိတျ လုပျကွံသူ။ ခတျေမီ လကျနကျတှေ ကိုငျလေ့ ရှိပွီး သူ့ပဈမှတျ ကို အခကျအခဲ မရှိ သှေးအေးအေး လုပျကွံနိုငျသူ။ စနိုကျပါ လကျဖွောငျ့ ဆရာကွီး သူ့ ပဈမှတျက Irrfan. Irrfanကလညျး ခသေူမဟုတျ။
ဘဏျ လုပျငနျးရှငျ တဈယောကျဖွဈပွီး နိုငျငံရေး ဘကျမှာပါ သွဇာ အတနျငယျ ရှိထားသူ။
ခရိုနီ တှေ နဲ့လညျး ရငျးနှီး ကြှမျးဝငျသူတဈယောကျ။ကောကျကဈြပွီး ဉာဏျမြားသူ။ Irrfanရဲ့ သူမြားတှအေပျေါ အနိုငျကငျြ့မှုတှကေို မကနြေပျတဲ့ Sanjayyဟာ အကှကျကကြ စီမံ ပွီး သာယာ တဲ့နတေ့ဈနေ့ မနကျ ၁၁ နာရီလောကျမှာ Irrfanကို ဖုနျးရုံဆီ လာစပွေီး ခေါငျမိုးပျေါကနေ စနိုကျပါနဲ့ခြိနျကာ…………..
ဘာတှဆေကျဖွဈမယျဆိုတာကတော့ ရငျသပျရှုမော ဖှယျကောငျးလှပါတယျ။ ရဲတှေ သတငျးထောကျတှေ နဲ့ ပါ Sanjayyတဈယောကျအားပွိုငျရပွီး Irrfanရဲ့ မကောငျးမှုတှကေို Irrfanကိုယျတိုငျလူသိရှငျကွား ထုတျဖျော ပွောဆိုဖို့ ဖိအားပေးစီစဉျတာဟာ အောငျမွငျမလား ဆိုတာကတော့….
ဒီတစ်ခါမှာတော့ အိန္ဒိယ ရုပ်ရှင်လောက မှာ ဆန်းသစ်တဲ့ ပုံစံနဲ့ လှုတ်လှုတ်ခတ်ခတ် ဖြစ်သွားစေတဲ့ ဇာတ်ကားလေး တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နာမည်က knock outတဲ့ မနက် ၁၁ နာရီ ကနေ နေ့ခင်း၁နာရီ အတွင်း ဖြစ်ပျက်သွားတာတွေကို စိတ်လှုပ်ရှား ဖွယ်ရာ ရိုက်ကူးတင်ဆက် ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့…. Sanjayy Dutt က ဘယ်သူ့ကိုမှ အယုံအကြည်မရှိတဲ့ တိတ်တဆိတ် လုပ်ကြံသူ။ ခေတ်မီ လက်နက်တွေ ကိုင်လေ့ ရှိပြီး သူ့ပစ်မှတ် ကို အခက်အခဲ မရှိ သွေးအေးအေး လုပ်ကြံနိုင်သူ။ စနိုက်ပါ လက်ဖြောင့် ဆရာကြီး သူ့ ပစ်မှတ်က Irrfan. Irrfanကလည်း ခေသူမဟုတ်။
ဘဏ် လုပ်ငန်းရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေး ဘက်မှာပါ သြဇာ အတန်ငယ် ရှိထားသူ။
ခရိုနီ တွေ နဲ့လည်း ရင်းနှီး ကျွမ်းဝင်သူတစ်ယောက်။ကောက်ကျစ်ပြီး ဉာဏ်များသူ။ Irrfanရဲ့ သူများတွေအပေါ် အနိုင်ကျင့်မှုတွေကို မကျေနပ်တဲ့ Sanjayyဟာ အကွက်ကျကျ စီမံ ပြီး သာယာ တဲ့နေ့တစ်နေ့ မနက် ၁၁ နာရီလောက်မှာ Irrfanကို ဖုန်းရုံဆီ လာစေပြီး ခေါင်မိုးပေါ်ကနေ စနိုက်ပါနဲ့ချိန်ကာ…………..
ဘာတွေဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကတော့ ရင်သပ်ရှုမော ဖွယ်ကောင်းလှပါတယ်။ ရဲတွေ သတင်းထောက်တွေ နဲ့ ပါ Sanjayyတစ်ယောက်အားပြိုင်ရပြီး Irrfanရဲ့ မကောင်းမှုတွေကို Irrfanကိုယ်တိုင်လူသိရှင်ကြား ထုတ်ဖော် ပြောဆိုဖို့ ဖိအားပေးစီစဉ်တာဟာ အောင်မြင်မလား ဆိုတာကတော့….